Shariif Xasan oo heshiis nabadeed dhex dhigay beelo ku dagaalamay Shabeelaha Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo gebagebeeyey shir lagu heshiisiinayey beelaha Biimaal iyo Habargidir, shirkaasoo uu qabtay maamulka Koonfur Galeed ee uu madaxweynaha ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadam.
Cabdinuur Caraale oo ah wasiirka dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dhinacyadaan ay nabadda wada qaateen, islamarkaana ay gaareen heshiis muhiim u ah dadka wada degan gobalada Koonfur Galbeed.
Waxa uu tilmaamay wasiirka in waxyaabaha ugu horeeya ee lagu heshiiyay ay ka mid tahay kala qaadista Maleeshiyaadkii dagaalamay, lana geeyo ciidamada dowladda meelaha ay isku hor fadhiyaan.
Wasiir Cabdinuur ayaa ka dalbaday dhinacyada wada saxiixday heshiiskaan in ay adkeeyaan, islamarkaana ka dhabeeyaan fulintooda.
– In ciddi jebisa heshiiskan lagu qaadi doono xeer ciqaabeedka u degsan Soomaalida iyo kan dowliga ahba.
– In goobihii lagu dagaalamay la geeyo ciidamado isku dhaf ah oo isugu jira boolis iyo Nabad sugid.
– In tababaro iyo dhaqan celin loo sameeyo maleeshiyaadka hubeysan ee gobolka ku sugan.
– In saldhigyada ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala gobolka loo cayimo goobo ka baxsan meelaha rayidka.
– In gar gaar beni’aadanimo loo fidiyo, loona sameeyo barnaamijyo dib u dejin ah dadkii ku barakacay colaadda.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlay heshiis shalay degmada Afgooye ay ku kala saxiixdeen Laba beel oo muddo ku dagaalamayay gobalka Shabeelaha Hoose, ayaa sheegay in heshiiskani uu dan u yahay dhamaan shacabka degan gobalada Seddaxda ee uu ka arimiyo maamulka Koonfur Galbeed.
Waxa uu tilmaamay madaxweynaha mar uu hadal ka jeedinayay gaba gabada shirkaan in heshiiska aanu cid gaar ah dan u ahayn, balse ay ku wada nafisayaan dhamaan shacabka ku dhaqan gobalada Bay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose.
Beelaha heshiiska kala saxiixday waxa uu ku adkeeyay in ay fuliyaan heshiiskaan, kana dhabeeyaan wixii ay ku heshiiyeen ee ay kala saxiixdeen.
Shariif Xasan ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya u sheegay in dhankeeda looga baahan yahay kala qeybqaadashada fulinta howlahaan, maadaama heshiis la dhex dhigay beelo muddo ku dagaalamayay gobalka Shabeelaha Hoose.
Dhanka kale Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in shacabka looga baahanyahay markaan in ay u istaagaan sidii ay maamulkooda ula shaqeyn lahaayeen, islamarkaana loo bilaabi lahaa dib u dhiska iyo ka shaqeynta nabadda.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay isku keenidda iyo wada hadal u furidda beelo ku dagaalamayay muddo badan gobalka Shabeelaha Hoose, kuwaa oo shalay heshiish ku kala saxiixday degmada Afgooye.
← Akhri: Labo wariye & gudoomiye Jaamacad oo ka mid noqday golaha wasiirada cusub → Why Russia’s Economy Will Not Collapse